अगस्त 2016 - सत्य वेद पुुस्तकहरू
Month: अगस्त 2016
मेरो योभन्दा अघिको लेखमा मैले मानवजाति उनीहरुको प्रारम्भिक सृष्टिको अवस्थाबाट कसरी पापमा फसेर पतित भयो भन्ने बारेमा उल्लेख गरेको थिएँ । तर बाइबल (वेद पस्तक) ले एउटा यस्तो योजना अगाडि बढाँउदछ जुन सुरुदेखि नै परमेश्‍वरको साथमा थियो । यो योजना एउटा यस्तो प्रतिज्ञामाथि आधारित छ जुन पूनः जारी गरिएको थियो वा यो योजना यस्तो योजना हो जुन परुषासूकतामा पनि गुन्जिन्छ ।
बाइबल वास्तविक एउटा पुस्तकालय
यो प्रतिज्ञाको महत्वलाई सराहना गर्नको लागि हामीले बाइबलको आधारभूत वास्तविकताको बारेमा जान्नु अति आवश्यक हुन्छ । यद्यपि यो एउटा पुस्तक हो र हामी यसलाई यस्तै नै सोच्छौँ पनि, अझ यसलाई एउटा गतिशील पुस्तकालयको रूपमा सोच्नु झन उचित हुन्छ । यस्तो किन भएको हो त भन्दा यो एउटा विभिन्न परिस्थिति तथा पृष्ठभूमिका विभिन्न लेखकहरूले १५०० वर्षको समयावधिमा लेखेका पुस्तकहरूका संकलन वा संग्रह हो । आज हामी यो पुस्तकलाई एउटै पुस्तकको रूपमा पाउन सक्छौँ—त्यो हो बाइबल । यहि एक तथ्यले आज बाइबललाई संसारका अन्य ठूलाठूला पुस्तकहरूका बीचमा ऋग्वेदजस्तै अद्वितीय बनाएका छन् । विभिन्न लेखाइको अतिरिक्त बाइबलका विभिन्न पुस्तकहरूले एउटा विवरण, विषयको घोषणा तथा भविष्यवाणीका निर्माण गर्दछ जसमा पछिका लेखकहरू आधारित हुन्छन् । यदि बाइबल एउटा लेखकद्वारा मात्र वा लेखकका समूहद्वारा मात्र लेखिएको हुन्थ्यो भने यो त्यति महत्वको हुने थिएन । तर बाइबलका लेखकहरू सयौँ वर्ष, हजारौँ वर्षको अन्तरालको फरकमा तथा विभिन्न सभ्यता, भाषा, संस्कृति र साहित्यिक विद्याहरूमा रहेर बाइबलका पुस्तकहरू लेखेका थिए तापनि उनीहरूले दिन खोजेका सन्देश तथा भविष्यवाणीहरू पछिका लेखकहरूद्वारा उस्तैतवरले लिइन्छ वा बाइबलभन्दा बाहिर प्रमाणित भएका ऐतिहासिक तथ्यहरूद्वारा पूरा भएको पाइन्छ । यस कुराले नै बाइबललाई पूर्णरूपले अद्वित्तीय बनाउछ र यही कुरालाई जानेर हामी बाइबलको सन्देशको बुझाईप्रति प्रेरित हुन सकिन्छ । पुरानो नियममा प्रस्तुत गरिएको पाण्डुलिपि (जुन पुस्तक येशू आउनुभन्दा अगाडि नै लेखिएको थियो) को लेखन २०० इसापूर्व पहिले नै भएको थियो, यसकारणले गर्दा पनि बाइबलको मूल पाठ संसारका सबै प्राचीन पुस्तकहरूभन्दा कैयौँ गुणा बढि उत्तम छ ।
बगैचामा मोक्षको प्रतिज्ञा
हामी बाइबलमा उत्पतिको पुस्तकको सुरुमा नै दिइएको मानिसको सृष्टि र पतनको विवरणमा यस पूर्व छाँयाको पक्षलाई स्पष्टसँग देख्न सक्छौँ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, हामी यसलाई आरम्भ मै देख्छदौँ, तर यो अन्तको ध्यानमा राख्दै लेखिएको थियो । यहाँ हामी एउटा प्रतिज्ञालाई देख्दछौँ जब सर्पको रूपमा दुष्टयाईँको रूप धारण गरेको परमेश्‍वरको विरोधी सैतानसँग उहाँले सामना गर्नुहुन्छ र त्यो सैतान उहाँसँग घुमाउरो तरिकाले बोल्दै ठीक यसको पछि मानिसलाई पापमा पतित गरिदिन्छ ।
“…अनि म (परमेश्‍वर) तेरो (सैतान) र स्त्रीको बीचमा र तेरो सन्तान र स्त्रीको सन्तानको बीचमा म दुश्मनी हालिदिनेछु । त्यसले तेरो शीर कुच्च्याउनेछ र तैले त्यसको कुर्कुच्चो डस्नेछस् ।” (उत्पत्ति ३: १५)
यसलाई ध्यानपूर्वक पढे पश्चात् तपाईँ यो देख्नुहुन्छ कि यहाँ पाँच वटा फरक पात्रहरू उल्लेख गरिएका छन् अनि यो एउटा भविष्यवाणी हो कि यहाँ आउनेवाला समय (जस्तो भविश्यत् काल जनाउन प्रयोग हुने शब्द ‘नेछ’ को दोहोरिने प्रयोगबाट देखिन्छ ) । पात्रहरू यी नै हुन्:
५. सैतानको वंश
यी पात्रहरू भविष्यमा कसरी एकअर्कामा सम्बन्धित हुनेछन् भनी यस जालसाजीले भविष्यवाणी गर्दछ । यसलाई निम्न तरिकाले तल देखाइएको छ ।
उत्पत्तिको पुस्तकमा उल्लेख गरिएका पात्रहरूका बीचमा सम्बन्ध
परमेश्‍वरले सैतान र स्त्री दुबैको ‘सन्तान’ हुने व्यवस्था गर्नुहुन्छ । यी सन्तानहरू बीचमा र स्त्री तथा सैतानबीचमा ‘शत्रुता’ वा घृणा हुनेछन् । सैतानले स्त्रीको सन्तानका ‘कुर्कुच्चो डस्नेछन्’ भने स्त्रीका सन्तानले सैतानको शीर कुच्च्याउनेछ ।
वंशको कटौती—एक नर
अहिलेसम्म हामीले सिधै मूल पाठबाट निरिक्षण गरेका छौँ । अब तर्कको लागि केही कटौती गरिन्छ । किनभने स्त्रीको सन्तानलाई ‘ऊ’ र ‘उनको’ भनी उल्लेख गरिएको छ । हामी जान्दछौँ कि यो एउटा एकल नर मानव— एउटा पुरुष हो । यसले हामी केही सम्भावित व्याख्यालाई छोड्न सक्छौँ । यस सन्तानको लागि ‘उनी’ को सट्टा ‘ऊ’ भन्ने शब्द प्रयोग भएको हुँदा यो स्त्री हुनसक्दैन । त्यस्तै गरेर ‘ऊ’ भनिएको हुँदा सन्तान ‘तिनीहरू’ होइनन् जो एक विश्वसनीय ढङ्गबाट, कदाचित एक समूहका मानिसहरू, एक समूह या एक जातिको साथ हुनसक्थ्यो । विभिन्न समयमा र विभिन्न तरिकाबाट मानिसहरू यो सोच्नसक्दछन् कि ‘तिनीहरू’ यसका उत्तर हुनसक्छ । तर सन्तानलाई ‘ऊ’ ले जनाइएको हुँदा यसले राष्ट्रलाई, वा कुनै निश्चित धर्म जुन हिन्दू, बौद्व, इसाइ वा मुस्लिम आदि जस्तो यो कुनै मानिसहरूको समूहलाई जनाउदैन । ‘ऊ’ चाहिँ एउटा मानव भएकोले यो कुनै निर्जिव वस्तु पनि होइन (सन्तानचाहिँ एउटा व्यक्ति हो) । यसले सम्भावनालाई पनि समाप्त गरिदिन्छ कि सन्तानचाहिँ एउटा खास दर्शन, शिक्षा, प्रविधि, राजनैतिक प्रणाली वा धर्म हो । यस्तो एक ठोस वस्तु सायद संसारको समस्याका समाधान गर्नको लागि हाम्रो रुचाइएको छनौट वा विकल्प भएको छ । हाम्रो परिस्थितिलाई के कुराले निश्चित गर्दछ त्योचाहिँ कुनै निर्जिव वस्तु हो भनी हामी सोच्छौँ, त्यसैले सबभन्दा असल मानव विचारक शताब्दियौदेखिँ विभिन्न राजनैतिक प्रणाली, शैक्षिक प्रणाली, प्राविधिक, धार्मिक प्रणाली आदिको लागि तर्कवितर्क गर्दै आएका छन् । तर यो प्रतिज्ञामा दिशासूचक कम्पासले विल्कुलै फरक दिशातर्फ संकेत गरेको छ । परमेश्‍वरसँग मनमा अरू केही — वा एक ‘ऊ’ वा ‘नर’ थियो । र यो ‘ऊ’ वा ‘नर’ ले सैतानको शीर कुच्च्याउथ्यो ।
जुन कुरा भनिएको छैन त्यसबाट एउटा अर्को चाखलाग्दो अवलोकनीय कुरा हाम्रो सामने आउछ । परमेश्‍वर यो प्रतिज्ञा पुरूषसँग गर्नुहुन्न जसरी स्त्रीको साथ गर्नुभयो । यो विल्कुलै असाधारण छ विशेषगरी जब पूरै बाइबल वा पूरै प्राचीन संसारमा वंश चल्नको लागि पिताद्वारा छोराहरू आएको कुरामा जोड दिइन्छ । वास्तवमा आधुनिक पश्चिमी विद्वानहरूद्वारा बाइबलमा दिइएको वंशावलीप्रतिको आलोचना यो हो कि तिनीहरू स्त्रीसँग जोडिएका रगतको नातालाई वेवास्ता गरिदिन्छ । यो कुरा पश्चिमी दृष्टिमा ‘लैङ्गिकववाद’ हो किनभने यसले पुरूषको वंशलाई मात्रै मान्छ । तर यस घटनामा एउटा पुरूषबाट आउने सन्तान वा वंश (‘ऊ’) को कुनै प्रतिज्ञा गरिएको छैन । यसले यो मात्रै भन्छ कि पुरूषलाई कुनै उल्लेख नगरीकन त्यहाँ एउटा स्त्रीबाट आउने सन्तान वा वंश हुनेछन् ।
अहिलेसम्म अस्तित्वमा आएका सबै मानिसहरूबाहेक ऐतिहासिक वा मिथक रूपबाट म यो सोच्न सक्छु कि अहिलेसम्म एक मात्र यस्तो व्यक्ति छन् जसले आफ्नो आमा भएको दावी गर्नहुन्छ तर त्यही समय उहाँको कुनै शारीरिक पिता थिएन । त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो येशू ख्रीष्ट (येशू सत्संग) जसको बारेमा नयाँ करार (यसरी यस्तो व्यक्ति जन्मनुहुनेछ भनी प्रतिज्ञा दिइएको हजारौ वर्षपछि लेखिएको पुस्तक) ले उहाँ एउटा कन्य केटीबाट जन्मिनुभएको हो भनी दावी गर्छ—यसकारण उहाँको माता त थियो तर कुनै पिता थिएन । के येशू समयको सुरुवातमा यस पजलमा प्रतिछाँयामा देखिनुभएको हो ? यसले यो कुरा जनाउँदछ कि सन्तान वा वंश ‘ऊ’ वा ‘नर’ हो तर ‘उनी’ वा ‘नारी’, ‘तिनीहरू’ वा ‘कुनै ठोस वस्तु’ होइन । त्यो दृष्टिकोणसाथ, यदि तपाईँ यस पजलको पढ्नुहुन्छ भने केही भागहरू ठीक ठाउँमा आउँछ ।
‘उसको कुर्कुच्चो डस्नेछ’??
सैतान/सर्पले उसको ‘कुकुच्चो डस्नेछ’ ? भन्नुको अर्थ के हुन्छ ? म अफ्रिकाको जँगलमा नगइन्जेलसम्म यसबारेमा मैले केही बुझिन । हामीले त्यहाँ गर्मीको समयामा पनि रबरले बनेको बाक्लो बुटजुत्ता लगाउनुपथ्र्यो—किनभने त्यहाँको लामोलामो घाँसमा लुकेर बसेका सर्पहरूले हाम्रो खुट्टा डस्न सक्थ्यो—जस्तो कुकुच्चो—जसले गर्दा त्यसले हामीलाई मार्न पनि सक्थ्यो । त्यहाँ मेरो पहिलो दिनमा झण्डै मैले सर्पलाई टेकेको छु, र म सम्भवत पर्न पनि सक्थेँ । त्यसपश्चात् यस पजलले मलाईँ यसको अर्थ बुझाइदियो । ‘ऊ’ वा ‘नर’ ले सर्पलाई सिध्याउन पनि सक्थ्यो (‘तेरो शीर कुच्च्याउनेछ’), तर उहाँले मूल्य तिर्नुपर्नेछ, उहाँ मारिनु पर्ने पनि हुनसक्छ (‘उसको कुकुच्चो डस्नेछ’)। त्योचाहिँ येशु ख्रीष्टको बलिदानद्वारा प्राप्त गरिएको विजयको प्रतिछाया हो ।
सर्पको वंश वा सन्तान ?
तर उहाँको अरू शत्रु को हो, के सैतानको वंश हो वा सन्तान हो ? यद्यपि यसबारेमा विस्तृत रूपबाट पत्ता लगाउनको लागि हामीसँग यहाँ स्थान छैन, तर पछिको पुस्तकले एक आउनेवाला व्यक्तिको बारेमा कुरा गर्छ । यस विवरणमाथि ध्यान दिनुहोस्:
भाइ हो हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमनको विषयमा र उहाँलाई भेट्न हामी एकसाथ भेला हुने विषयमा…कसैले पनि तिमीहरूलाई कुनै पनि तरिकामा धोकामा नपारोस्, किनभने पहिले विद्रोह नभएसम्म र पापको मानिस अर्थात सर्वनासको छोरो प्रकट नभएसम्म त्यो दिन आउनेछैन । त्यसले ईश्वर कहलिएका सबै अथवा पूज्य वस्तुहरूको विरोध गर्छ र तीभन्दा आफैलाई उच्च तुल्याउछ, यहाँसम्म कि आफैलाई परमेश्‍वर नै घोषणा गरेर परमेश्‍वरको घरमा त्यो बस्छ । (२ थेसलोनिकी २ : १—४), पावलद्वारा ग्रीसमा ५० ईस्वी सम्वतमा लेखिएको।
पछिका यी पुस्तकहरूले स्त्रीका सन्तान वा वंश र सैतानका सन्तान वा वंशका बीचमा भएको टकरावको घट्दो गन्तिको बारेमा स्पष्टसँग बताउछ । तर यो कुरालाई पहिलो पटक उत्पत्तिको पुस्तक जुनचाहिँ मानव इतिहासको सुरुवात हो त्यसमा दिइएको प्रतिज्ञामा भु्रणको जस्तो स्वरूपमा यसको व्याख्याको पूर्ण हुने आशाका साथ उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले इतिहासको चरमोत्कर्ष, परमेश्‍वर र सैतान बीचमा अन्तिम प्रतिस्पर्धाको घट्लो गन्ति, धेरै समय अगाडि बगैचामा सुरु भएको कुरा पनि आरम्भ मै— सुरुवाती पुस्तकमै देखिन्छ ।
हामीले योभन्दा पहिलाको लेखमा प्राचीन पुरूषासूक्ताको भजनमाथि ध्यान दिएका थियौँ । यो भजनले पनि एउटा सिद्व पुरूष व्यक्ति—पुरूषा—आउदै हुनुहुन्छ भनी भविष्यवाणी गर्यो जो व्यक्तिचाहिँ मानवीय शक्तिद्वारा आउनुहुदैनथ्यो । यो पुरूष व्यक्तिलाई बलिदानको लागि दिइन्थ्यो । वास्तविकता त यो हो जुन हामीले देख्यौँ कि प्रारम्भिक समयमा नै परमेश्‍वरको मन र मष्तिस्कमा यो कुरा निर्णय तथा निश्चित भएको थियो । के यी दुबै पुस्तकले एउटै व्यक्तिको बारेमा बताइरहेका छन् ? म यो विश्‍वास गर्छु कि तिनीहरू दुबैले एउटै व्यक्तिको बारेमा बताइरहेका छन् । एक दिन उहाँले पुरूषको देहधारण गर्नुहुनेछ ता कि यो व्यक्तिलाई बलिदानमा दिन सकियोस् — जुनचाहिँ जुनसुकै धर्मका भए पनि सबै मानवजातिका लागि विश्‍वव्यापी आवश्यकता हो भन्ने कुरा पुरूषासूक्ता र उत्पत्तिको प्रतिज्ञाले उही एउटै घट्नाको सम्झना गर्दछ । तर यो प्रतिज्ञा ऋग्वेद र बाइबलको बीचमा बराबरी भने छैन । किनभने तिनीहरूले सुरुवाती मानवीय इतिहासका उल्लेद गर्दछ र त्यसका साथै तिनीहरूले अन्य समानान्तर कुराहरूका बारेमा पनि उल्लेख गर्दछ जुनचाहिँ हामी अर्को लेखमा हेर्नेछौँ ।
लेखक Ragnarप्रकाशित 30/08/2016 15/09/2016 श्रेणिया बाइबल (वेद पुस्तकहरू) मार्फत यात्रा - Through Bibleटैग्स Purusha र उत्पत्ति, उत्पत्ति 3:15, उत्पत्ति र Purusasukta, प्रमोदवनमा आदम, महिला को बीउ, महिला को सन्तान, शैतानको नाश
भ्रष्ट (भाग २)…आफ्नो निशानाबाट चुक्नु
हामी परमेश्‍वरको जुन स्वरूपमा बनिएका छौँ त्यही परमेश्‍वरको वास्तविक स्वरूपबाट हामी मानिसहरू भ्रष्ट भएको कुरालाई वेद पुस्तक (बाइबल) ले कसरी वर्णन गर्दछ त भन्ने कुरामाथि योभन्दा पहिलाको मेरो लेखमा मैले प्रस्तुत गरेको थिएँ । यस कुरालाई अझ राम्रो तवरले हेर्नको लागि मलाईँ एउटा चित्रले सहायता गेरेको छ र त्यो चित्र हो मिडिल अर्थको ओर्कस, अल्बसबाट भ्रष्ट भएको । यसैले बाइबलले हामीलाई यसरी वर्णन गर्छन् । तर यो कसरी भयो त ?
यसको बारेमा बाइबलको उत्पत्तिको पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ । परमेश्‍वरको स्वरूपमा रचिएपछिको थोरै समयपश्चात् सृष्टिको पहिलो मानव परीक्षामा पारिएको थियो । लेखिएको वृतान्तले यस घट्नालाई सर्पसँगको बातचितको रूपमा उल्लेख गर्दछ । सर्पलाई सधैँ विश्वव्यापीरूपमा शैतान—परमेश्‍वरको खिलापमा उभिने आत्माको रूपमा लिइने गरिन्छ । बाइबलअनुसार, शैतानले प्रायजसो अर्को व्यक्तिद्घारा बोलेर वा काम गरेर दुष्ट्याईँको निम्ति परीक्षामा पार्ने काम गर्दछ । यस घटनामा शैतान एउटा सर्पद्घारा बोल्यो । यसलाई यसरी उल्लेख गरिएको छः
परमप्रभु परमेश्‍वरले बनाउनुभएका बनपशुहरूमध्ये सर्प सबैभन्दा धूर्त थियो । एक दिन त्यसले स्त्रीलाई भन्यो, “के साँच्चै परमेश्‍वरले ‘तिमीहरूलाई बगैँचाको कुनै पनि रूखको फल नखानू भनी भन्नुभएको छ?’”
“स्त्रीले सर्पलाई भनिन्, हामी बगैचाका रूखहरूका फल खान सक्छौँ, तर बगैँचाको बीचमा भएको रूखका फलको विषयमा परमेश्‍वरले भन्नुभएको छ, त्योचाहिँ नखानू र नछुनू, नत्र तिमीहरू मर्नेछौँ ।”
“किनकि परमेश्‍वर जान्नुहुन्छ कि जुन दिन तिमीहरू त्यो खान्छौँ त्यही दिन तिमीहरूका आँखा खुल्नेछन् र असल र खराबको ज्ञान पाएर तिमीहरू परमेश्‍वरजस्तै हुनेछौँ ।”
शैतानको कुरा सुनेर त्यसै गर्नुपर्ने रहेछ भनी स्त्री विश्वस्त भइन् । उनले देखिन् कि त्यस रूखको फल खानलाई असल र हेर्नमा रहरलाग्दो थियो र शैतानले भनेअनुसार बुद्घि पाउनलाई त्यस रूखको फल खान चाहिन्। त्यसैले उनले त्यस रूखबाट केही फल टिपेर खाइन् । अनि आफूसँगै भएको आफ्नो पतिलाई पनि दिइन् र उनले पनि खाए । त्यही क्षणमा तिनीहरू दुबैको आँखा खुले र आफू नाङ्गै रहेको भन्ने थाहा पाएर लाज महसुस गरे । अनि आफ्ना लाज ढाक्नको लागि अञ्जीरका पातहरू गाँसेर तिनीहरूले वस्त्र बनाए । (उत्पत्ति ३:६)
उनीहरू ‘परमेश्‍वरजस्तै हुनुसक्ने’ भन्ने कुरा नै उनीहरूका यसप्रकारको छनौटको मुख्य जड् थियो अनि त्यो परीक्षा यसको लागि थियो । यस समयसम्म उनीहरूले हरेक कुराहरूका लागि परमेश्‍वरमा भरोसा तथा विश्‍वास गरेका थिए र सबै कुराहरूका लागि परमेश्‍वरको वचनलाई मानेका थिए । तर अब यी सबै कुराहरूलाई पछाडि छोड्दै, आफैमाथि भरोसा गर्दै र सबै कुराहरूको लागि आफ्नै बोलीमाथि भर पर्दै तिनीहरू ‘परमेश्‍वरजस्तै हुने’ छनौट तिनीहरूसँग थियो । तिनीहरू आफ्नो लागि आफै, ‘परमेश्‍वर हुनसक्थ्यो’, तिनीहरू आफ्नो जहाजको लागि आफै कप्तान हुनसक्थ्यो, आफ्नो गन्तव्यको लागि आफै ‘मालिक’ हुनसक्थ्यो, अनि स्वनिर्देशित तथा आफैप्रति जवाफदेही हुनसक्थ्यो।
परमेश्‍वरप्रति उनीहरूले गरेको विद्रोहको कारण उनीहरूमा केही परिवर्तन आएको थियो। सन्दर्भमा उल्लेख भएअनुसार उनीहरूले लाज महसुस गरे अनि आफूलाई ढाक्ने कोशिस गरे । वास्तवमा जब परमेश्‍वरले आदमको अनाज्ञाकारिताको लागि सामना गर्नुभयो आदमले हव्वा (परमेश्‍वर जसले उनलाई बनाउनुभयो) लाई यसको लागि दोष लगाइदियो । यसको बदलामा फरि हव्वाले सर्पलाई दोष लगाईदिइन् । यसरी कसैले पनि आफ्नो जवाफदेहिता स्वीकार गर्न चाहेन ।
आदमले गरेको विद्रोहको परिणाम
अनि जे जति त्यस दिन आरम्भ भयो त्यो आजको दिनसम्म पनि निरन्तर चलिरहेको छ किनकि हामीमा पनि सोहीप्रकारको निहित स्वभाव छ जसलाई हामीले जन्मजात उत्तराधिकारको रूपमा पाएका छौँ । त्यसैकारणले गर्दा हामी पनि आदमजस्तै व्यवहार गर्छौँ—किनकि हामीले आदमको स्वभावलाई जन्मजातरूपबाट नै लिएर आएका हुन्छौँ । हामी मानवजाति आदमले गरेको विद्रोहको कारण दोषी भएका छौँ भन्ने बाइबलको कुरामा कतिपयले गलत बुझाई बुझेका छन् । वास्तवमा भन्ने हो भने त आदम नै यस घट्नाको मुख्य दोषी हो तर हामी सबै जना त्यस विद्रोहको परिणामस्वरूप जीवन व्यतित गदै आइरहेका छौँ । यस कुरालाई हामी अनुवंशीयतवरले सोच्न सक्दछौँ । बालबालिकाहरूले उनीहरूका बाबु आमाको जीनलाई वंशानुगतरूपमा प्राप्त गर्दै असल र खराब स्वभावहरू लिएर आउने गर्दछन् । हामीले आदमको यस्तो विद्रोही स्वभावलाई वंशानुगतरूपमै लिएर आएका हुन्छौँ, वा जन्मजातरूपमै वा थाहै नपाई अन्जानमा नै लिएर आएका हुन्छौँ तर हामी यसरी जानीबुझी पनि आदमले शुरुवात गरेको त्यस विद्रोहलाई हाम्रो जीवनमा निरन्तरता दिन्छौँ । हामी ब्रह्माण्डको परमेश्‍वर बन्ने चाहना राख्दैनौँ तर हामी आफ्नै कतिपय परिवेशमा भने परमेश्‍वरबाट परनिर्भर, स्वायत्त वा अलग भएर आफै ईश्वर झैँ बन्न चाहन्छौँ ।
आजको दिनमा एकदमै स्पष्ट देखिने पापको प्रभाव
अनि हामीले थोरै मूल्यको सम्झने वा साधारणतवरले लिने हाम्रो मानवीय जीवनको बारेमा यसले अधिक विवरण दिने गर्दछ । प्रत्येक ठाउँहरूमा मानिसहरूले आफ्नो घरका ढोकाहरू बन्द गर्नुपर्ने, तिनीहरूलाई प्रहरीप्रशासन, वकिल, बैंक कारोबारको लागि कसैले थाहा नपाउने गोप्य पासवर्डको आदिको जरुरत पर्ने आदिको कारण पनि यही हो किनकि हामी अहिलेको हाम्रो परिस्थितिमा एकअर्कालाई लुट्द छौँ । यसैकारण साम्राज्य तथा समाजहरू सबै नै अन्त्यमा पतन भएर तथा ढलेर जान्छन्—किनभने यी सबै साम्राज्यहरूका नागरिकहरूका प्रवृत्ति पतन हुनु नै थिए । सबै तरिकाका सरकारका स्वरूप तथा आर्थिक प्रणालीहरूका उपयोग गर्ने कामपश्चात्, यद्यपि अन्य कार्यभन्दा असल गर्दै, प्रत्येक राजनैतिक वा आर्थिक प्रणाली यो आफैमा ढलेर जाने देखिन्छ किनभने यी विचारधारा बोकेका मानिसहरूसँग त्यस्तो प्रवृत्तिहरू हुन्छन् जसले अन्तमा गएर सम्पूर्ण प्रणालीलाई नै तल पारेर बिगार्ने गर्दछ । यसकारणले गर्दा अहिलेसम्म अस्तित्वमा आएको हाम्रो पुष्ता नै सबभन्दा धेरै शिक्षित भए तापनि हामीसँग अझै यस्ता समस्याहरू छन् किनभने यो हाम्रो शैक्षिक स्तरभन्दा पनि अझ गहिरोसँग गडेको छ । यसैले हामी स्वयम्लाई प्रतासना मंत्रको प्रार्थनाको साथमा राम्रोसँग पहिचान गर्न सकिन्छ—किनभने यसले हामीलाई राम्रोतवरले वर्णन गर्दछ।
यो त्यही हो कि किन कुनै पनि धर्मले तिनीहरूको समाजको लागि आफ्नो दर्शनलाई पूरै तवरले ल्याउन पाउदैन—यद्यपि यहाँसम्म कि अनिश्वरवादीहरू पनि (सोभियत संघको स्टालिन, चीनको माओ, कम्बोडियाको पोल पोटको बारेमा सोच्नुहोस् ) — किनकि हाम्रो अघि कुनै यस्तो चीज छ जसले हाम्रो बाटोमा हाम्रो दर्शन पूरा गर्ने काममा हामीलाई चुकाउनको लागि खड छ । वास्तवमा ‘गुमाउनु’ वा ‘चुकाउनु’ भन्ने शब्द हामीले भोग्ने परिस्थितिको सारांश हो । यो कुरालाई अझ राम्रो तवरले बुझ्नको लागि बाइबलको एउटा पदले मलाईँ उपयुक्त तस्विर प्रदान गर्दछ । यस पदले यसरी बताउँछ कि:
यी मानिसहरूबाहेक गिबाका सात सय चुनिएका मानिसहरू थिए । यी सबैमध्ये देब्रे हात चलाउने अरू सात सय चुनिएका मानिसहरू पनि थिए जसले घुयेँत्रोले कुनै निशाना पनि चुकाँउदैनथे । (न्यायकर्ता २०:१६)
यो पदले घुयेँत्रो चलाउँनमा कुशल र आफ्ना निशाना कहिल्यै पनि नचुकाउने सिपाहीहरूको बारेमा वर्णन गर्दछ। ‘चुक्ने’ भन्ने शब्दको मूल हिब्रू भाषामा अनुवादित शब्द יַחֲטִֽא हो । यो उही हिब्रू शब्दलाई बाइबलको धेरैजसो ठाउँमा ‘पाप’ को रूपमा पनि अनुवाद गरिएको छ । उदाहरणको लागि, यो उही हिब्रू शब्द ‘पाप’ को लागि पनि प्रयोग भएको छ जब एउटा दासको रूपमा मिश्रमा बेचिएको योसेफले उसको मालिकको पत्नीले व्यभिचारको लागि फकाउदासमेत उनीसँग व्यभिचार गर्दैन । यसबेला योसेफले मालिकको पत्नीलाई यसो भने कि :
यस घरमा मभन्दा ठूलो कोही छैन । मेरो मालिकले तपाईँबाहेक सबै कुरा मलाईँ दिनुभएको छ, किनभने तपार्इँ उहाँकी पत्नी हुनुहुन्छ । तब म कसरी यस्तो घोर दुष्ट काम गरेर परमेश्‍वरको विरुद्घमा मैले पाप गर्नु ? (उत्पत्ति ३९:९)
ठीक दश आज्ञा दिएपश्चात् यसले यसरी बताँउदछ कि :
मोसाले मानिसहरूलाई भने “नडराओ किनकि परमेश्‍वर तिमीहरूलाई जाच्नको लागि र उहाँको भय तिमीहरूका सामु रहोस् र तिमीहरूले पाप नगर भनेर आउनुभएको छ ।” (प्रस्थान २०:२०)
यी दुबै स्थानहरूमा उही हिब्रू शब्द יַחֲטִֽא लाई पापको अर्थ बुझाउने शब्दको रूपमा प्रयोग गरिएको छ । यो ठीक त्यही शब्द हो जुन यी पदहरूमा वर्णन गरिएको सिपाही र उनीहरूको घुयँत्रोले लगाउने निशानाको सन्दर्भमा ‘चुक्ने’ भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ जसको अर्थ हुन्छ ‘पाप’ जतिबेला मानिसहरू एकअर्कामा कार्यव्यवहार गरिरहेका हुन्छन् । यसले ‘पाप’ के हो भन्ने कुरा बुझ्न सहायताको लागि हामीलाई एउटा तस्विर प्रदान गर्दछ । एउटा सिपाहीले निशानामा लगाउनको लागि ढुङ्गा लिन्छ र त्यसलाई घुयेँत्रोमा बाँध्छ । यदि यस कुरामा ऊ चुक्छ भने उसको उद्घेश्य प्राप्त गर्ने काममा ऊ असफल हुन्छ । त्यस्तै गरेर, हामीले परमेश्‍वरलाई हामीसँग कसरी सम्बन्धित गरेका छौँ र अरूहरूसँग कसरी व्यवहार गरेका छौँ भन्ने बारेको निशानालाई समात्नको लागि हामीचाही परमेश्‍वरको स्वरूपमा बनिएका थियौँ । ‘पाप’ गर्नु भनेको यो उद्घेश्यलाई वा निशानालाई चुकाउनु वा गुमाउनु भन्ने हुन्छ जुन उद्घेश्य वा निशाना हाम्रा लागि प्रस्ताव गरिएका थिए साथै हामी हाम्रो लागि विभिन्न प्रणालीहरू, धर्महरू तथा विचारधाराहरूमा पनि आफ्ना लागि चाहना राख्दछौँ ।
‘पाप’ को नराम्रो समाचार—प्राथमिकताको होइन तर सत्यको विषय
मानवजातिलाई झल्काउने यो भ्रष्ट तथा निशानाबाट चुकेको तस्विर त्यति धेरै सुन्दर छैन, यो राम्रो हो भनेर महसुस गर्न लायक पनि छैन न त यो आशावादी नै छ । वर्षौँ पछि यो खास शिक्षाको विरुद्घमा मानिसहरूले बेजोडका साथ प्रतिक्रिया देखाएको मैले पाएँ । म यहाँ क्यानडामा रहेको विश्वविद्यालयको एउटा विधार्थीले रिसको झोकमा “म तिमीलाई विश्‍वास गर्दिन किनभने तिमी जे भनिरहेका छौ त्यो म मन पराउदिन” भन्दै मलाईँ हेरिरहेको सम्झन्छु । हुनसक्छ कि हामी यो मन पराउदैनौ तर यसरी मन नपराउनु पनि एउटा निशानाबाट चुक्नु हो । कुनै पनि कुरालाई मन पराउनुमा त्यो सत्य हो वा होइन भन्ने कुरासँग के सम्बन्ध छ ? मलाईँ कर तिर्ने काम, युद्घहरू, एड्स तथा भूकम्पहरू मन पर्दैन—अरू कसैलाई पनि मन पर्दैन—तर तिनीहरू यसबाट भागेर टाढा जानसक्दैनन्, न त हामी यीमध्ये कुनैलाई वेवास्ता नै गर्नसक्छौँ ।
हामीले हाम्रो समाजमा हामी आफैलाई एक अर्काबाट संरक्षण गर्न बनाएका कानून, प्रहरी, ताला चाबी, सुरक्षा आदिको प्रक्रिया प्रणालीहरूले केही कुरा गलत छन् भनेर हामीलाई सुझाव दिन्छ । वास्तविकता यो हो कि कुम्भमेला जस्ता चाडहरूले लाखौँ मानिसहरूका ‘आफ्ना पाप धुनको लागि’ आफूतर्फ आकर्षण गर्दछ भन्ने कुराले हामीले कुनै न कुनै तरिकामा हाम्रो ‘निशाना’ गुमाएका छौँ भन्ने कुरा आफै स्वभाविक तवरले जान्दछौँ । फेरि अर्को वास्तविकता यो पनि हो कि स्वर्ग जानको लागि चढाउनुपर्ने बलिदानको विचारधारा सबै धर्महरूमा पाइन्छन् जुन हाम्रो बारेमा केही कुरा बेठीक छन् भनेर देखाउने एउटा संकेत हो । सबभन्दा अन्तमा, यो धर्मसिद्घान्तलाई निष्पक्षतवरले बुझ्नको लागि आवश्यक छ।
तर पापको यो सिद्घान्त हामी सबैलाई निशानाबाट चुकाउदै सबै धर्महरू, भाषाहरू तथा जातिहरूमा विद्यमान छन्— जसले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाँउदछ । यससँग परमेश्‍वर के गर्न गइरहनुभएको छ ? हामी परमेश्‍वरको प्रतिक्रियाको बारेमा हाम्रो अर्को पोष्ट वा लेखमा हेर्नेछौँ—जहाँ हामी आउनुहने उद्घारक पुरुषाको पहिलो प्रतिज्ञालाई हेर्नेछौँ जो हाम्रो लागि पठाइनुभएको हो ।
लेखक Ragnarप्रकाशित 30/08/2016 श्रेणिया बाइबल (वेद पुस्तकहरू) मार्फत यात्रा - Through Bibleटैग्स आदम को पाप, आदम र उत्पत्तिको पुस्तक, कसरी आदमले पाप, पाप के हो, पाप बुझ्न, हामी किन पाप गर्छन्?